10+ webụsaịtị manhwa webtoons kacha mma na 2021 - Gụọ Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics online
Gbaara WEBTOON mmelite
Nwunye m agbanyere nkwekọrịta na-ajụ m oyi
Ajọ nwa agbọghọ Karuna adala
10+ webụsaịtị manhwa kacha mma na 2021
Weebụsaịtị webtoons kacha mma (manhwa) na -agwa gị ihe ọchị Korea na 2021
Gịnị bụ webtoon?
Ị nwere ike maraworị na ihe ọchị Korea, makwaara dị ka manwa, mbụ wepụtara na 1940s. Manhwa dị iche iche na isiokwu niile, nke dọtara ọtụtụ ndị na -agụ akwụkwọ kemgbe mmalite ya. N'ime oge ọ bụla, a ga -enwe njirimara dị iche iche, nke pụtara na manhwa ga -agabiga ihe iji zere ihe na -ekwesịghị ịdị. N'ime oge ọhụrụ nke nwere teknụzụ mepere emepe, anaghị ebipụta manhwa dị ka ọ dị na mbụ, mana kama a na -ebipụta manhwa dị ka akụkọ dijitalụ. Nke a dị mma ma dịkwa mma maka onye na -agụ ya. Agbanyeghị, manhwa ka dị n'asụsụ mbụ, yabụ maka ndị na -agụ akwụkwọ si mba ọzọ, ọ na -esiri ha ike ịgụ. Enwere ọtụtụ ntụgharị asụsụ mana nke a abụghị iwu. Ọ dabara nke ọma, ụbọchị ndị a, webụsaịtị agbakwunyere akụkọ n'ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ, ọtụtụ na -enyekwa ha n'efu.
Ụdị webtoon a na -ahụkarị
Fantasy: Ruo ugbu a, anyị ekwenyela na ọ bụ naanị ndị dike nwere ike ime ihe pụrụ iche. Nke ahụ nwere ike ọ gaghị adị ọzọ taa ebe ndị okike nwere ọgụgụ isi dere akụkọ na -eme ka anyị "nwee nkụda mmụọ". A ga -akpọrịrị ụfọdụ aha ndị ama ama dịka "ụbọchị nwụrụ anwụ", "Ezi Beuaty",… Ndị a niile bụ ndị ama ama manwa taa.
Romance Manhwa: Ọ bụrụ na ị hụrụ ihe nkiri K-drama n'anya, nke a bụ n'ezie ụdị maka gị. Enweela fim ole na ole emegharịrị na usoro ndị a. Ihe nkiri banyere ọbọgwụ jọrọ njọ nke na -arọ nrọ ịghọ ọmarịcha swan ma ọ bụ akụkọ mmetụta uche na -emetụ n'obi ndị na -agụ ya. Ekwesịrị ịkpọ aha ụfọdụ: “Ezi Mma”, “Misaeng”,…
Ebube na oke egwu Manhwa: Ụdị a nwere ike yie ụdị echiche efu n'ihi na enwere ọtụtụ myirịta. Agbanyeghị, ụdị a nwekwara ihe dị iche, nke dị na ihe karịrị ike mmadụ. Ezigbo ihe atụ ekwuru bụ "Ekwensu Nọmba 4" ebe nwa agbọghọ chọrọ inwe ihe niile na otu o si eme ya bụ inye mkpụrụ obi ya mmụọ ọjọọ ka ọ nweta ya.
Thriller Manhwa: Ndị na -agụ akwụkwọ nke ụdị ọkacha mmasị ha bụ akparamaagwa mpụ bụ nke a maka gị. Aha a ma ama “Bastard” bụ obere ihe nkiri gbasara nwa nwoke na -enweghị isi nke nna ya bụ ogbugbu. Kedu ihe mere?
BL Manhwa: BL bụ ụdị pụtara n'oge na -adịbeghị anya. Nke a bụ ụdị na -ekwu maka ịhụnanya dị n'etiti ụmụ nwoke abụọ nke a na -elekwasịkarị anya na ndị na -agụ nwanyị. Ihe kpatara webtoons manwa na-ewuzi ewu ewu.
E nwere ọtụtụ puku ihe kpatara webtoon ji na -amawanye nke ọma na ndị na -agụ ya maara ya. Nke mbụ bụ mbipụta webtoon. Laa azụ n'ụbọchị a ga -ebipụta webtoon na nke ahụ bụ oge na ego. Mana ugbu a ebipụta webtoon na ntanetị ma ndị na -agụ ya chọrọ naanị ngwaọrụ mkpanaka ejikọrọ na ịntanetị ka ha nwee ike gụọ usoro ọkacha mmasị ha. Ọ bụrụ na ebipụta ya, onye na -agụ ya ga -atụgharị ibe ọ bụla, mana ugbu a na ekwentị, pịgharịa gaa n'ihu ka ị gaa n'ihu na -agụ. Site na ngwa ịntanetị, a na -egosi webtoon nke ọma, nhazi ya doro anya, dị mfe ma dị mfe maka ndị na -agụ ya iji. Site na mmepe nke teknụzụ dị ugbu a, ndị ọrụ ga -ahọrọ iji ekwentị ha na -amụ ihe kama ijide akwụkwọ. Ebe ọ bụla, oge ọ bụla ha nwere ike gụọ webtoon. Dịka m kwuru n'elu, atụgharịala manhwa webtoon n'ọtụtụ asụsụ, nke pụtara na webtoon erutela ọtụtụ ndị na -agụ akwụkwọ gburugburu ụwa.
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ webtoon n'anya, ị nwere ike ịchọta webtoons kacha mma online na ndepụta a na 2021
3 - Ọtụtụcom.com
4 - Ọtụtụ ihe ọchị
Madara - Ozi